Daryeelka kale - Baaritaanka Uurka ee Bilaashka ah, Qorsheynta Qoyska Xakamaynta Dhalashada, Ifilada
Waxaan nahay qoys doorbid ah, cudurada haweenka iyo umulaha, luuqado badan, xarun caafimaad oo bulshada u jaheysan oo bixisa adeegyo caafimaad oo taranka caafimaad oo ay kujirto daryeel kale si ay kaaga caawiso inaad caafimaad hesho.
Waxaan ku bixinnaa daryeel caafimaad oo xirfad iyo qarsoodi ah khidmadaha la bixiyo ee gaarka loo leeyahay oo la awoodi karo iyo sidoo kale caymisyada badankood. Dhamaan bukaankeena waxay ka faa'iideysan doonaan sanadaha daryeelka caafimaadka taranka iyo qoyska ee shaqaalaheena ay bixiyeen.
Naxariista, ixtiraamka, fahamka iyo ixtiraamka ayaa ah aasaaska xiriiradayada bukaan socodka iyo shaqaalaha.
Shaqaalaheena kalkaaliyaasha caafimaadka ee diiwaangashan, LPNs, barayaasha bukaan socodka, maamulayaasha iyo khabiirada cudurada haweenka ee labka iyo dheddigga oo ay ku takhasusay daryeelka caafimaadka taranka. Shaqaalaheennu waa luuqado badan iyo dhaqamo kala duwan.
Tijaabinta Uurka Bilaashka ah
Xarunta Daryeelka Caafimaadka Kaniisadda Falls waxaan ku bixinnaa Baaritaanka Uurka
Baadhitaanka HCG ee uurka kaadida bilaashka ah. Hel natiijooyinka inta aad sugeyso.
Kharash yar oo ah baaritaanka uurka ee dhiigga. Natiijooyinka dib loogu celiyo 2 maalmood.
$ 190 khidmadda bixinta gaarka ah ama u isticmaal caymiska sonogram.
Balamaha waa la qadarinayaa, laakiin waa lagugu soo dhaweynayaa inaad soo gasho balan la'aan.
Bukaannada dhammaan jihooyinka galmada iyo muujinta jinsiga ayaa lagu soo dhaweynayaa daryeelka caafimaadkeena tayada leh.
Sidee ugu dhakhsaha badan ayaa lagu ogaan karaa uur? - laga bilaabo 7 ilaa 10 maalmood ka dib rimidda (in ka badan 3 toddobaad kadib muddadi kuugu dambeysay), baaritaanka uur qaadida kaadida (heerka Hcg ee ka sarreeya 10) ayaa laga yaabaa inuu akhriyo wax fiican laakiin sonogram weli ma muujineyso uurka.
Qorshaynta Qoyska & Xakamaynta Dhalashada
Xulashada Qorshaynta Qoyska iyo Xakamaynta Dhalashada iyo Qaababka
FCHC waxay siisaa waxbarasho caafimaad ragga iyo dumarka da 'kasta ha lahaadeene si ay u gaaraan go'aan mas'uul ah, oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa galmada. Haddii aad galmo ahaan firfircoon tahay oo aadan rabin inaad uur yeelato, isticmaal ka hortagga uurka si aad uur yeelato. Dhammaan noocyada ka-hortagga uurku kaama ilaalin karaan cudurrada galmada lagu kala qaado. Waa muhiim inaad barato xulashooyinkaaga iyo khatarahaaga hab kasta.
Congress-ka Mareykanka ee Dhakhaatiirta Haweenka iyo Dhakhaatiirta Haweenka ayaa daabacaad weyn ku leh Sidee xakameynta dhalashada u shaqeysaa - Waxbarashada Bukaanka.
Carruurta yar yar waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay kala hadlaan xulashooyinka waalidkood ama qof weyn oo ay ku kalsoon yihiin.
Haddii aad xiiseyneyso inaad bilowdo habka xakameynta dhalashada ama aad rabto macluumaad, shaqaalaheennu way ku caawin karaan!
Macluumaadka xakameynta dhalashada waxaa lagu soo daray adeegyadaada caafimaad maya lacag dheeraad ah.
La hadal takhtarkaaga inta lagu jiro ballantaada si aad ugala hadasho hababka ka hortagga uurka.
Waxaad sidoo kale si gooni gooni ah u jadwal u yeelan kartaa fadhiga latalinta Ikhtiyaariyada Kala-bixinta Dhalashada.
FCHC waxay bixisaa habab kala duwan si aad u bilaabi karto ilaalinta naftaada isla markaaba.
Hababka Ka Hortagga Dhalmada waxaa ka mid ah:
Kiniiniyada ka hortagga uurka Alesse, FemconFe, Seasonale, Loestrin, Xilli Ciyaareedka, XAGAAGA, Yasmin
NuvaRing® - NuvaRing waa giraan yar oo dabacsan oo siilka loo isticmaalo oo looga hortago uurka. Waxaad gelineysaa muddo 3 toddobaad ah, ka soo saar, ka dibna mid cusub toddobaad gudihiis geli.
Patch® - ORTHO EVRA® balastarka ka hortagga uurka usbuuciiba mar. Waxay waxtar u leedahay sida Kiniinka.
IUD: Mirena ® - Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine system) waa hormoon sii deynta IUD oo la galiyay ilmagaleenkaaga si looga hortago uurka ilaa iyo inta aad rabto ilaa 5 sano. Mirena waxay kaloo daaweysaa xilliyada culus ee haweenka doorta ka hortagga uurka ee uur-ku-jirta. ama ParaGard® - Paragard® waa IUD ilaa 10 sano.
XDayaanna ® - Qalabka daawada laguu qoro ee gacantaada ku dhaca si looga hortago uurka
DMPA "DEPO" ("Tallaalka") - badbaado, waxtar leh, oo xakameynta dhalmada ee la isku duro ah
Hababka kale: Wareegyada Wareegga, Laxanka Wareegga Dabiiciga ah, Kondhomyada
Qorshaha B (Ka hortagga uurka degdega ah) - waxay ka caawisaa kahortaga uurka kadib galmo aan ilaalin ama xakameyn la'aanta dhalmada
Tallaalka ifilada xilliyeed
Ha faafin hargabka - Ha ku dhicin hargabka. Iska tallaal tallaalka ifilada xilliyeed.
Sida laga soo xigtay CDC, tallaalka hargabku wuxuu u dhexeeyaa 70-90% waxtar u leh ka-hortagga hargabka dadka caafimaadka qaba ee ka yar 65 jir. Sanka lagu buufiyo waxaa loo yaqaan FluMist. Talaalka kuguma sababi doono inaad hargab ku dhacdo. Waxay u oggolaanaysaa jirkaaga inuu horumariyo unugyada difaaca jirka ee loo baahan yahay si loola dagaallamo fayrasyada ifilada. Waxaa laga yaabaa inaad fal-celin yar ku yeelato tallaalka, oo ay ku jiraan xannuun ka jira goobta la duray, murqo xanuun yar ama qandho FluMist waa tallaal fayras nool oo daciifa. Taasi waxay ka dhigan tahay in laga sameeyay fayras nool oo loogu talagalay inuusan keenin hargabka.
Qaado ficilo maalinle ah si aad caafimaad u ahaato Ku qufac ama ku hindhis unug. Haddii aadan mid haysan, isticmaal shaarkaaga ma gacantaada. Gacmahaaga badanaa ku dhaq saabuun iyo biyo. Isticmaal masax gacmeed aalkolo leh haddii aadan haysan saabuun iyo biyo. Isku day inaadan taaban indhahaaga, sankaaga, iyo afkaaga. Jeermiska ayaa sidaa ku faafay. Guriga joog haddii aad jiran tahay. Tani waxay ka caawineysaa dadka kale inay bukoodaan.
Calaamadaha ifilada Dadka hargabku ku dhaco badanaa waxay dareemaan qaar ama dhammaan astaamahan:
Qandho * ama aad dareento qandho / dhaxan
Sanka oo buuqsan ama buuqsan
Murqaha ama xanuun jirka ah
Daal (aad u daallan)
Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay yeeshaan matag iyo shuban. Tani waxay ku badan tahay carruurta marka loo eego dadka waaweyn.
* Qof walba oo hargab qaba kuma dhici doono qandho.
Maxaan sameeyaa haddii aan jirado? Guriga joog! Badanaa dadka ifilada qaba uma baahna inay arkaan dhakhtar. La xiriir dhakhtarkaaga haddii aad jiran tahay iyo haddii aad uur leedahay, aad leedahay xaalad caafimaad oo joogto ah sida neefta, kaadi macaanka, cudurka wadnaha, ama cudur sambabaha ah. Ama haddii ilmahaagu ka yar yahay 5 sano ama aad ka weyn tahay 65 sano.
Habka kaliya ee ugu fiican ee looga hortagi karo hargabka ayaa ah in la qaato talaalka hargabka sanad kasta.
Tixraac noo Jadwalka Fee qiimaha daryeelka ilmo soo rididda iyo daryeelka caafimaadka dumarka.